किन बढिरहेको छ काेराेनाका कारण मृत्यु ? चिकित्सकहरू यसो भन्छन् – NawalpurTimes.com
किन बढिरहेको छ काेराेनाका कारण मृत्यु ? चिकित्सकहरू यसो भन्छन्
प्रकाशित : २०७७ मंसिर १९ गते १७:२५
बीबीसी । नेपालमा पछिल्लो समय कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित हुने मानिसको सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा कम देखिए पनि मृत्यु हुने सङ्क्रमतिको सङ्ख्यामा देखिएको वृद्धिले सङ्क्रमण फैलिने क्रम आधिकारिक रूपमा गरिएको आकलनभन्दा बढी हुनसक्ने विज्ञहरूले ‌औँल्याएका छन्।
नेपालको पछिल्लो अवस्थाबारे तथ्याङ्क हेर्दा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै अस्पतालहरू समेत खचाखच हुँदाको अवस्थाभन्दा हाल मृत्यु हुनेहरूको अनुपात बढिरहेको देखिन्छ।
अधिकांश मानिसमा लक्षण देखिँदा घरमै आइसोलेशनमा बस्ने र सिकिस्त भएपछि मात्रै अस्पताल पुग्ने हुँदा पनि मृत्यु धेरै भएको हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कका अनुसार नेपालमा बिहीवार अपराह्णसम्म २,३७,००० भन्दा बढी मानिसमा कोभिड-१९ पुष्टि भएको छ। तीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी निको भइसकेका छन्।
उमेर समूह हेर्दा सबैभन्दा बढी २१ देखि ३० वर्ष सम्मका मानिसहरूमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसपछि सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित ३१ देखि ४० वर्षभित्रका छन्।
तर हाल अस्पतालहरूमा चाप घटेको र त्यो पनि बढ्दो मृत्युदरसँग सम्बन्धित रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। “अक्सिजन थोरै घट्दा अस्पताल आइपुग्ने अधिकांश मानिसहरूलाई हामी बचाउन सफल भएका छौँ,” डा. सुवेदीले भने।
डा. पुन पनि त्यो कुरा स्वीकार्छन् र अवस्था जटिल भएपछि अस्पताल आउँदा ज्यान जाने सम्भावना बढी हुने बताउँछन्। “भेन्टिलेटरमै राख्नुपर्ने अवस्थामा जे पनि हुन सक्छ। त्यो कुनै जादुको छडी होइन,” उनले थपे।
“एघार दिनसम्म ज्वरो आउँदा समेत घरमै बसेको अनि लगातार दुई तिन दिनसम्म श्वासप्रश्वासमा समस्या हुँदा समेत घरमै बसेका बिरामी मैले भेटेको छु।”धेरै मानिसमा घरमै बस्दा आफ्नो अवस्था कस्तो रहँदा के गर्ने भन्ने विषयमा पर्याप्त जानकारी नहुँदा समस्या बढ्दै गएको उनी बताउँछन्।